Taariikhda Rikoooo.com - Rikoooo
Website cinwaanka : http://www.rikoooo.com
Website dabeecadda : Jilidda hawada Computer
Diiwaangelinta : Free, hadiyadaha waa u suurtoobaan
Mulkiilaha : Erik Bender
sano ay billaabashada : 2005
1/ Xaaladda dhabta ah
2/ Taariikhda Background - Developpment - Future
Rikoooo.com waa website a Faransiis hibeeyeen ilaa ay istuuray diyaarad on computer, inta badan ka go'an in Microsoft "Flight Qabille", iyadoo qaybo ka mid ah oo ku saabsan "Laminar Research" iyo "X-Diyaarad". Tan iyo waayitaanka Francesim.com ee ka qoomameeyay, saxaafadda French gaar ah loo tixgeliyaa Rikoooo.com sida website-ka ugu weyn ee Faransiis ku saabsan mowduuca.
Waxay bixisaa, beddelkeeda diiwaangelinta a free (fikradda wadaagga), wax badan oo downloads, sida diyaaradaha, seaplanes, helicopters iyo gliders ah waqti kasta iyo sidoo kale sceneries. All files kuwan waxaa lagu rakibay rakibayo ah automatic.
wadooyinka Air inuu u duulo waxaa laga heli karaa, oo ah qaab qorshe diyaarad ka soo Cirka, oo dhaxalkaygiina juqraafi, taariikhi ah iyo suugaanta. Qaar ka mid ah wadooyinka, kuwaas waxaa loo isticmaalaa by websites in uu abaabulo duulimaad network, sida YQUET-Aviation.
Dad badan oo Casharrada iyo talooyin la heli karaa sidoo kale, in gole aad u firfircoon mahad; ah search engine gudaha fududeeyaa, via erayada muhiimka ah, si ay xal u helaan si dhaqso ah, oo ku saabsan iskuulka lagtiisa iyo dar-ons arrimaha (qiyaastii fariimaha 140.000 dhaansan iyo xaddiday).
In si la mid ah sida dhigma ay Anglo-Saxon ee (Avsim, FlightSim, FS wadini iwm ...), website-ka ayaa la kulmay badan oo ka mid ah arrimaha farsamo ama dhibaatooyin kale oo sannad ka sannad, gaar ahaan on forum, halkaas oo si qarsoodi ah, dadka qaar ay ku lug lahaayeen Xadgudba afka ah; ma aha, in kiisaskan, goobooyin kuteen, laakiin kuwa xiriirka.
Tani waxay ifafaale mar hore ka dhacay 80 ee, markii qaar ka mid ah idaacadaha free PSG, sida Carbone 14, ay bilaabeen interactivity telephonic; iyadoo la isticmaalayo magaciisa telephonic, dhagaystayaasha qaar ka mid ah naftooda loo ogol yahay, kuwaas oo noocee ah dhaqanka.
Xalka wuxuu ka kooban yahay in la xaddido helitaanka si ay forumka, via aqoonsi dhab ah dadka isticmaala ee. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah Erik Bender ee (abuuraha) relentlessness, Rikoooo.com maamulo ka dhanka ah qalmay oo dhan, si ay u koraan in dhibic ka mid ah isagoo warbixin radio a on "France Inter", on December 2009 (Carnets de Campagne / Philippe Bertrand).
Foomamka aqoonsiga Members 'ayaa muujinaya in ay jiraan wax lays a duwanyihiin adduunka oo dhan, sida ugu badan ee dalalka ku hadla afka Faransiiska iyo xataa kuwa Ingiriiska ku hadla. jagooyinka juqraafi Members ', oo ay ku jiraan noocyo, oo ay uga oggolaanayaan in ay la xiriiri xubin kale, kaas oo u ogolaanaya shirarka iyo koox.
Created ee 2005 by Erik Bender, oo ku nool agagaarka Toulouse (meel THE Faransiis Cirka), ayuu by uploading diyaaradaha by horumarinta kala duwan sameeyey bilaabay. Mar walba waxa uu ku weydiiyo kamaqabyada in iyagii dhigay website-ka.
frequentation Rikoooo.com ayaa waxaa si joogto ah u sii kordhaya tan iyo November 2008, markii Bender dhuftay dharbaaxo weyn la "pack AirFrance". Taasoo keentay in laba sano oo shaqo ah, this xirmo 270 MB isu keentaa lagama maarmaanka ah ee raxan diyaaradaha ee, la modellings samir helay adduunka oo dhan. Marka hore uploaded for FS9, a FSX version socon ayaa daabacay April 2010, iyo labadan baakadaha ayaa soo bixi jeer 113.000, taas oo ah tirada ugu sareeya abid ka mid ah files 300 laga heli karaa website-ka maanta la duubay. Oo sannaddaas isla, ku dhawaad ​​laba milyan oo downloads ayaa xusay baxay baakadaha oo dhan laga heli karaa Rikoooo.com.
Wax yar ka hor, dhamaadka 2007, Erik Bender ayaa abuuray qaybta ah "Qodobka", iyada oo Michel Lagneau, tababaraha by ganacsiga, kaas oo ku fikiraya in duulaya la mana sababo caga toona, xataa shiidaa ay la mid tahay muujinta "hadalka aawadiis ee ka hadlaya ", waxay bilaabeen in 2008 u dhigay qorshaha duulimaadka online ka meelihii hantida ahaa qaar ka mid ah kor ku xusan. qasdigiisa waa in la isticmaalo Qabille oo sida qalab waxbarasho kale oo aan ahayn" hab barankaro "ee tijaabinta iyo navigation anteenada. Waxaa ka mid ah afartan wadooyinka sida qoraa, qaar ka mid ah iyaga ka mid ah, iyadoo ka qayb of taariikhyahan Cirka Faransiis Robert Espérou iyo Fernande Bonnemain ee "Compagnie Franco Roumaine de Navigation Aérienne" (CFRNA) ee 20s ah, Michel Lagneau yaabay qof walba la daabaco inta lagu jiro dayrta 2009, in Faransiis oo la oggolaansho qoraaga, ee buugga log Peter Askovich ee, kuwaas oo abuuray intii lagu 2003 / 2004 160 a joojinta dhibcood oo safar ay caalamka la Flight Qabille 2004 (FS9). Thanks to 35,000 this kiiloomitir celiso hami badan labada barka, hadashay isaga by, oo ay weheliyaan a socday album sawir, Askovich, taasoo muujinaysa samir a amaan waayo 9 bilood ee safarka, laga saaray software this category ka ciyaarta PC halkaas waa ganacsi xudduud ka. Michel Lagneau hodan version Faransiiska la faallooyin encyclopedic ku saabsan meelaha buuxdhaafay, furitaanka jidka waxa uu ku baaqay in: hab encyclopedic la Flight Qabille. Laakiin ka hor in, Peter Askovich la oran karo waa sida maamaan ah oo ka mid ah "ciyaarta halis ah", iyo sidoo asRikoooo.com oo waa ciidankii turjumaad ee, lagu xusay in saxaafadda French gaar ah. Michel Lagneau qoray "Petite Histoire de l'Aviation sous Flight Qabille" sano ka dib.
At simistarka kowaad ee 2011, iyadoo la kaashanaysa David Canadian ah Malloch iyo Jim American ah Douglas, wuxuu mar kale innovates la daabaco laba maqaalo taariikh nololeedkooda la Flight Qabille on Rikoooo.com. Qofka ugu horeeya ee ku saabsan tijaabo Quebecer Jacques R. Hebert, oo midkood kan kale, Australia dhakhtar duulaya Clyde Corwall Fenton, labada aan la garanayn in Europe, iyo dib u 30 ee noo keen. David Malloch iyo Michel Lagneau aqbaleen inay ururiyaan macluumaad taariikhi ah, gaar ahaan ka Pierre Thiffault, taariikhyahan aasaas Aerovision ee Quebec. Jim Douglas, uu qayb ka, abuuray De Havilland DH 60 Gipsy balanbaalis for Qabille oo ka, caawisay by David Malloch in la sameeyo liveries gaar ah. Diyaarad Tani ayaa la isticmaalay by labada duuliye ee su'aasha iyo waxaa laga heli karaa FlightSim.com.
On July 2011, Erik Bender ku celiyay inuu fikrad of xirmo dhamaystiran, iyadoo wakhtigaas, raxan ka Emirates 'oo ku dhawaaqay, eegaya guusha gaadhi, inuu doonayo inuu sii sidan. Waa tusaale ahaan keliya ee duurka jooga horumarinta freeware loogu talagalay FS. Waxaa la sameeyey on 16th November 2011 la raxan Masar Air ayaa meesha Bender isku dayo in la yareeyo farqiga u dhexeeya "freeware" iyo "payware" by suurawdo diyaarado qaar ka mid ah qaababka la badanaa laga helaa "payware dar-ons" ka hor.
Dhowr qof oo ka caawiyay for free Erik Bender sida waqtiga by tagaa. Bilowga 2010, Eddy Belfiore, dalwaddii pilot iyo video gaare, waxay bilaabeen filim dhererka buuxda u waxyoonay by qorshe duulimaad Askovich iyo biiray Erik Bender sida Maamulaha ah, had iyo jeer si iskood ah, ee Rikoooo.com. Golaha, maamula Moderators iskaa wax u qabso, waxay leedahay qaybo kala duwan, oo mid kasta uu leeyahay maadada saxda ah, iyo waxa dhaq-gudaha u eg (boosteejada & irdaha) garoonka diyaaradaha. Waxay leedahay kooxo wadahadal, kuwaas oo loo abuuray xubnaha naftooda, laakiin sidoo kale qaybta ah "Sawiro" (sawiro 3000) iyo a "Video" mid ka mid ah (videos 1000), kuwaas oo bixiya in ay ka tirsan in ay soo bandhigaan realizations ay. xidhiidhada 120 000 yihiin diiwaan bil kasta celcelis ahaan, iyo ilaa mar 2000 maalin kasta, gaar ahaan marka cusub add-ons waxaa putted online, maxaa yeelay xubnaha waxaa loogu warside. website ayaa 80,000 diiwaangashan dadka, la 1000 diiwaangelinta cusub celcelis ahaan bil kasta, mararka qaarkood 2000, la 3 in 5 ah iyadana cusub bil kasta. website waxay soo bandhigaysaa bandhig joogto ah farshaxankiisa Jean-Pierre Michel ayaa, waa kan Ranjiile rasmiga ah ee Air iyo Space iyo bedelka istaahila Paul Lengellé (1908-1993). Waa content a gebi ahaanba ka duwan, laakiin mid aad u weyn, marka websites kale "kaliya" saaray dar-ons online.
Inkastoo ay in, ay sabab u content asal ah oo mashaariic hami, Rikoooo.com waa kiis gaar ah gudaha boqolaal Flight Qabille & websites X-diyaarad, in xeerkii waxa uu ahaa "Ailes Françaises" taariikhda tan iyo 100 sano.
Waxa kale oo ay duubay si hindisa ee North-American istuuray duulimaadka PC, Bruce Artwick, kuwaas oo u dhashay ah beesha caalamka dareen da'da ah oo dhan, taas oo xusuusinayaa jiidashada duulimaadka shimbirta (calaamad by quraafaad Icare ah) inta lagu jiro Qarniyadii hore. Laakiin wuu u malayn kartaa oo ku saabsan in markii uu abuuray model ugu horeysay horyaalka? Waxaa duubay si barametereka duulista aad; sida walaalaha Wright, Clément Ader, iyo kuwo kale oo badan, liiska waa muddo dheer.
tartame Flight Aadan Qabille waa X-Diyaarad, abuuray by Austin American ah Meyer (Laminar Research) ee 1988, in uu yahay in la yidhaahdo toban sannadood ku dhow ka dib markii baaritaano ugu horeysay Bruce Artwick ee. Si dhakhso ah, Meyer miyir ku go'aansadeen in ay soo jeedin uu Qabille oo hoos Mac, Linux & Windows, lid ku ah Microsoft kan Abuuray FS oo kaliya hoos Windows. A "Muranka" dhacay, horseeday inta badan by qaar ka mid ah dadka isticmaala badan naftooda ku dhiirigelinayaan in uu. Sannad ka sannad, waxaan dhihi karaa in ay jirto xaqiiqo cad: Flight Aadan Qabille, sababtoo ah ka hormariyaan, waxaa si dhaqso ah ku faafay adduunka oo dhan, sababtoo ah diyaaradaha ee (da'da ama cusub) iyo sceneries dhammaystir ah tiro aan isticmaali kartaa la software this. Nasiib darro, X-diyaarad ma aha kiiskan. Laakiinse waxaa isaga ka abuuray Austin Meyer aan la niyad jabin, wuxuu had iyo goor cusbooneysiisaa uu Qabille oo la versions cusub. Tan iyo bilowgii 2010, sida Rikoooo.com doonayay in la sii hayo habka ay u sameeyaan dagaalkan Ciyaalle, ka demo X-Diyaarad 9 ahaa online saaray. Inta lagu guda jiro 2012 ugu horeysay semester, ayuu ka abuuray rakibe si toos ah loogu talagalay X-Diyaarad 9 oo la yimid Paul Glanville ee Airbus A320. rakibayo An si toos ah loogu talagalay X-Diyaarad 10 baa imanaysa, oo xiriir la leh horumarinta kala duwan on tago, in ay soo gudbiyaan ka badan X-Diyaarad dar-ons. Isla mar ahaantaana, FS dar-ons gelinaya on-line sii heer joogto ah, waxaan la soco karo Embraer A-29B Super Tucano ah by Tim Piglet Conrad iyo muuqaal Airport International Los Angeles (KLAX) by Glen Johnson, ka mid ah badan kuwa kale inta lagu jiro qaybta hore ee 2012. On December 16th 2011, Rikoooo.com abuuray account ku shabakada bulshada ee Facebook. target Bender waa in ay sii wado xiriirka joogtada ah xubnaha, laakiin sidoo kale si kor loogu qaado internet-ka ee dunida oo dhan. Inta lagu guda jiro 2012, a tartanka cusub sawir la abuuray, maamula Thomas Guiart (tomxsg). Toddobaad kasta, theme cusub la soo jeediyay iyo xubnaha codayn iyo naftooda dooran guusha. "Simureal" taxanaha, waxaa ka mid ahaa in tartan this, qalmaa Xusuuso gaar ah: heerka la mid ah todobaadle, a photo Cirka dhabta ah waxaa lagu daabacay iyo duuliyayaasha dalwaddii u leeyihiin in ay u soo saari sidii si daacad ah sida ugu macquulsan ay Qabille. Kuwan shots, la daabacay intii lagu jiray kuwaas oo tartamada oo saaxiibtinimo, waxaan fahamsanahay in sawir dhaqameed waa qayb muhiim ah oo istuuray hawada computer. Michel Lagneau weli baaris iyo la qabsashada ee duulista ganacsiga si ay u soo celin la Flight Qabille. Ka mid ah toban wadooyinka la daabacay intii lagu jiray 2012 ugu horeysay semester, waxaan ka heli on May qabsashada cusub ka soo dhaxalkooda suugaanta. Waa "l'Incroyable Randonnée du Pacific Clipper sous Flight Qabille", buugga «The Long Way Home» by the American Edmund «Ed» Dover, sarkaal radio hore ee American Pan ku Airways. Buugani wuxuu sheegayaa sheeko dhab ah oo aan la garanayn (in Europe) ee seaplane ah, 314 Boeing, ee airline isla, waxgelinta xanniban ee New-Zealand on December 7th 1941, isla maalintaas weerar lama filaan ah ugu Pearl Harbour ah. In view of dangerousness in ay dib u California tago via Badweynta Pacific, Pan Am ku amray shaqaalaha in ay dib ugu soo celin afartan tan oo liner duulaya qaali ah by duulaya badan Australia, Asia, Middle-East, Africa iyo Atlantic Ocean. Joojinta meel marka la joojiyo meel, waxaannu raaci si sameeysa Australia faallooyin Bruce Kennewell mahad safarka. Galeen la turjumaad Michel Lagneau ee cutubka IV soosaaray, dabcan la oggolaansho qoraaga. Ka dib markii ay maqaalo taariikh nololeedkooda ku saabsan Jacques R. Hebert iyo Clyde Cornwall Fenton, waa iskaashi saddexaad oo caalami ah la xidhiidh ah oo taariikhi ah ku qaadeen la Rikoooo.com. Si aad u soo afjarto la barwaaqoobi ah simistarka taas horta 2012, Erik Bender dhigeysa online ku 14th of June Royal Air Maroc ee, Atlas-Blue ayaa & maraakiibta Jet4you ee FSX, sida dajinta a free, dabcan.
Aadan Qabille A cusub uu isaga qudhiisu ka hadlay, Prepar3D, oo la aasaasay bishii June 2010 by shirkadda American Lockheed-Martin Corporation, laba magacyada loo yaqaan oo duurka ku Cirka. version 6th ee lagu daabacay March 2012. Lockheed-Martin ayaa dib u soo iibsaday ruqsada FSX Microsoft ee horumarinta ay software istuuray u gaar ah. In opinion Erik Bender ayaa: "Prepar3D waa FSX version labaad, oo caan ah oo la mustaqbal! (...) FSX dar-ons waxaa lagu Prepar3D qeybsanaan socon iyo ku xigeenka maxaa yeelay, waxay leeyihiin saldhig isla, hagaagtay, in kiiska Prepar3D ee ". Sida laga soo xigtay this iyo Flight guuldaraysatay (Qabille oo cusub Microsoft ayaa la billaabay bishii February 2012 laakiin tagay 3 bilood ka dib), Bender go'aansaday miday joogtada ah ee FSX dar-ons online gelin la Prepar3D. Isla mar ahaantaana, version labaad ee raxan ah AirFrance ee waa la diyaariyey, taas oo ka mid noqon doona SkySpirit2012 ee CRJ1000 (No VC) iyo ogeysiisyada xirma kuwaas oo haatan ka shaqeeya AirFrance. Sida photos tartanka leeyihiin guul dhab ah, Thoms Guiart (tomxsg) abaabulan xilliga dayrta / jiilaalka 2012 laba tartanka weyn (kaadh & Winter Magic) la iskaashi la Saitek, taas oo uu leeyahay Joysticks sida abaalmarino. Labada tartamada wac kor u dhexeeya tartame 100 iyo 200 oo ahaa madax xanuun dhab ah xaakinnadii. Haddii kale, Top 20 ee tartanka kasta ayaa muujinaya in sawir dalwaddii noqday tahay sax ah.
Haddii 2011 ayaa sanadka oo dhan Xadgudba (togan ama taban), 2012 arkay horumarka ah degan, maskax furan dhammaan isbeddellada istuuray.
Markii waagu beryo of this 2013 cusub sano, kooxda la Erik Bender shaqeeya ka kooban yahay by: Thomas Guiart (tomxsg) co-maamule, Mathieu Fédiakine (Absolam) Rikoooo ee naqshadeynta artist & Rikoooo ee logo abuure iyo muuqaallada kale, Laurent Lepot (Wolf29) ugu Haguhu qadiimiga ah iyo la taliye, Julien (Moustikblanc31) Haguhu iyo la taliye, laakiin sidoo kale tijaabo dhab ah, Valentin Witon (Airlink) & Jérôme (jejetoulouse) kaaliyaha Moderators iyo taliyayaal. Oo dabcan Michel Lagneau (michel95) kuwaas oo, tan iyo shan sano, eryanayn uu mashruuca inay la qabsadaan taariikhda duulista ganacsiga hoos Flight Qabille.
Sida gabagabo, waa in aan jeclaan lahaa in Erik Bender iyo la-hawlgalayaasheeda tegi on la fikrad soo socda: male xoog, iyo this, iyadoo la isticmaalayo oo dhan teknoolajiyada kombiyuutarada ee la xiriirta la Internet ah, ka dib markii duulista dalwaddii, oo aannan malayn karaa sida ay u ' noqon doonto in dhowr sano.